Akukho ukudla ephelele futhi indlela elula ukuba anciphise umzimba, kodwa kukhona futhi izazi yimpumelelo kakhulu ukwazi ukucabanga ngobuciko upende supply system, okuvumela ngokuvumelanayo futhi ngokushelela ukunciphisa isisindo ngaphandle kokuyekethisa impilo kanye nokubukeka. Yiqiniso, asikwazi qiniseka ukuthi lokhu Ukudla esiyingqayizivele ofanele kuwo wonke umuntu, kodwa njengoba ezinye izinguquko, kuye ngale ndaba, singasebenza. Ngokwesibonelo, uhlelo "Amandla Slim" izimpendulo wathola isikhathi eside, ngaphezu kwalokho, kungakhathaliseki ubulili.
Muntu kuncike nobuthakathaka babo. Asikwazi lotidzelako ikhekhe ngokweqile, uthole injabulo itiye noshukela noma ukunambitha crackers okunosawoti. Singabantu ngezindlela ezithile kubi kunokwakuqala izilwane bakudala, njengoba siya ku mayelana izinkanuko zabo. Ngakho-ke, kunzima ukuthola emuva endleleni ashintshe nokuthuthukisa inqubo ukugaya. Ukuze wenze lokhu, siba ukushaya izandla zabo zokungaziphathi kahle, beveza isijeziso, ukubala ikhalori nsuku zonke futhi ahlanganise uhlu imikhiqizo uvinjelwe. Uma aphathe ke omubi, kuba umsebenzi onzima futhi ungase ucabange. Lona iphutha eyinhloko bonke abantu ukuncipha. Kodwa ukuncipha - akahlupheki. Lesi yisinyathelo ebhekiswe ungubani entsha, isinyathelo ku ikusasa entsha sibalo, ukudlala futhi ukuhamba. Uhlelo kwesisindo kungaba indlela, kuvusa izinqubo umzimba emzimbeni. Lo muntu yesimanje has kuze kuqala kunokukhonza ukudla bese usetha ilungelo badla ukudla okungenampilo. Lapho ngakho ngoba mnandi!
Yini ehlanganisiwe hlelo?
Evamile, ezine noma umkhiqizo izingxenye kungaba avelele, olokuqala okuyinto isiphuzo nkinga eyenziwe itiye zemvelo ezimhlophe, lemongrass, Aloe, eliphakathi kwe prickly, rhubarb kanye Mint. Lena elixir wangempela ubuhle, aqede puffiness futhi kunciphisa umthamo ngezithukuthuku ekususeni ketshezi. Ngokwemvelo, kuba nomphumela isisu, kodwa umphumela akuphazamisi omubi empilweni. Isiphuzo ehlanza nezinso isibindi, kususa kusukela wamathumbu ubuthi, amathoni futhi inikeza amandla usuku lonke. Mhlawumbe ungabiza ke amandla? Yebo! Kuphela elingenalo ewusizo futhi nzima inhliziyo. Intengo yokudla okuncane - ruble 490 okwesikhathi izikhwama ezimbalwa.
Uma uphuza ngokwanele, inkambo zingabekwa ukulawula esesuthi "ukulawula Ukudla", okwenza kungabi indlala imihelo futhi ukunciphisa ngomunye yesithathu inani ukudla washisa. Phela, lo ngezikhawu phakathi ukudla lungaboniswa kwamahora amahlanu. Ngo iqoqo izinti 20 cishe 13 amagremu. Inani futhi wengcindezelo - ruble 1150.
Ngaphezu kwalokho kungenzeka ukuhlola Activator umzimba "Metaboliki" okwemvelo ngangokunokwenzeka. Kusekelwe itiye elimhlophe futhi oluhlaza, ikhofi green, eCayenne kanye emnyama, kanye - ginger. Isimiso ilula: "Metaboliki" Uphendula ezitolo amafutha zibe amandla nokuthi ngokoqobo wosa Kilos owengeziwe. Ngo iqoqo 40 amaphilisi ka mg 400. Isilinganiso intengo - ruble mayelana 490.
Isici sokugcina, ngaphandle lapho Amandla Slim akuphelele - kungcono wangaphambili ukuma "komzimba". Yena kuqinisa kwemisipha isikhumba okuxekethile, kuvimbela ukubonakala amafutha ekuqongeleleni entsha. Ngaphezu kwalokho, kuyasiza ukulawula ukudla ukunciphisa izifiso amaswidi. Inani akumangalisi - 490 ruble ngoba amaphilisi 40.
Ake uqale nge iqiniso lokuthi Amandla Slim wenza eRussia ekukhiqizweni umugqa ayo LLC "NL Izwekazi". Umsebenzi wona wawungemubi hhayi inyanga, nokunye okuningi. Kodwa ngalesi sikhathi, bonke ezidingekayo kwangaphambilini izifundo, ukuhlolwa kanye nezitifiketi yayiqhutshelwa. Namuhla imikhiqizo isilungele ukusetshenziswa, futhi Uhlelo kwesisindo ulithola abathengi abaningi. Abakhiqizi awanikeli panacea, kodwa uyayalwa ukuba sihambisane izikhathi futhi ukunambitheka ekudleni kwakho isidlo ewusizo neziphuzo. Ngosizo cocktail olinganiselayo isisindo okweqile balahle amakhulu abantu. Nale ibhonasi, bayakwazi ukulawula amandla. ngqó, impendulo ingu umugqa ukudla okwamavila, kodwa kuye kwesisindo inqubo kuyoba lula futhi kujabulise. Esizoqala ekukhiqizeni kwaba Flagship Energy Ukudla. Ukusebenzisa kwakhe njalo isisindo ukulahleka kungenzeka ukuthola kude esilula akhathazayo indlela yokudla ehambisana nempilo umsoco. Kodwa esiswini welulela futhi okungasebenzi kanzima inciphise ukudla washisa, futhi namanje akwaziwa ukuthi ingozi ukubangelwa ukudla kakhulu. Ngakho-ke, abakhiqizi sebefike esiphethweni sokuthi kudingeka umugqa imikhiqizo ukusiza ukuncipha. Futhi kwaba uchungechunge "Amandla Slim" isisindo ukulahleka.
Yini ebangela umsebenzi?
Kungani umthengi kungenzeka bakholelwa kuZiqu imikhiqizo yenkampani? Kuyadingeka lokumba inkinga ka isisindo okweqile. Ubonakala ngenxa yokudla engafanele kanye nokungawuvivinyi umzimba. Ngenxa yalezi zizathu, umzimba wethu ngokoqobo ezumeka. Njengoba thina bayingxenye enkulu liqukethe amanzi, kunengqondo ukuba bazohlala izindawo umzimba, stagnates futhi iba base enkulu ekuqongeleleni ubuthi amanyela. Umsebenzi imikhiqizo ezihambisana - ukuvusa umzimba wethu amile futhi ugijime ukunyakaza emzimbeni. Ukuze nokususa ngokweqile umswakama amanzi unesibopho. Isisindo, ngasendleleni, ayikwazi ukushintshwa, kodwa imiqulu "kukhasa". Okokuqala nge okhalweni okhalweni. Uhlelo "Amandla Slim" akusho okungenamingcele engalawuliwe ukudla ukudla neziphuzo zapivanie. Lena inkambo izinsuku 25, okungase okuphindaphindiwe emva kwesikhathi abanye. Phakathi nale nkathi, ungakwazi usimamise isisindo sakho, ukwakha imikhuba lesifanele wezokudla. Sonke lesi sikhathi, isiguli uyozizwa induduzo egcwele nezingokwengqondo.
Uma uthatha "Metaboliki" ( "Slim Amandla"), khona-ke kancane kancane ukusheshisa a umzimba evilaphayo, kwadingeka ukuba "ziyophela" isikhathi ukudla donuts futhi zavela ukuphila esivuthayo. Le ibhekwa ukudla kukusiza ukuba bayeke isisindo off emhlabathini. Uma une okubizwa ngokuthi ithafa umphumela, kuyindlela ephumelela kakhulu ukuyinqoba. On lonke uhla imikhiqizo angezelelweko ihlose ukusebenza ngal. Kodwa kufanele sikhumbule ukuthi muhle futhi ube nobunye benganikezwa ngeze. Kubo ukukhokha kamuva futhi okhandlayo. Nge ukukhiqizwa ochungechungeni, ungavele ubone imiphumela oyifunayo ngokushesha. By the way, isisindo elahlekile ngeke abuyele kule nqubo.
Abaningi imibuzo ukhathazekile umthamo. Uma ngisho makudle imikhiqizo kusukela "Amandla Slim" ukuthi angalenza kanjani? Into yokuqala udinga ukukukhumbuza ukuthi ukulandelana ezibekwe uhlelo ayikwazi ukushintshwa, ngoba yakhiwe kucatshangelwa izitho zomzimba. Inqubo ungathi ukwakhiwa kwebhilidi multi-storey, lapho kungekho iphuzu ekwenzeni ophahleni ngaphandle kwesisekelo. Umuntu akakwazi ucabange ukuthi emvimbela ukuncipha, futhi ngakho-ke indlela olunzulu inikeza imiphumela emihle kakhulu. Uma udinga high quality Imiphumela ke udinga ukwenza izinto ngendlela ehlelekile.
Isisekelo zohlelo ukuthatha efanayo ngalezo zinsuku-25. Ezinsukwini zokuqala ezinhlanu, udinga ukuthatha phezu Stick abakhwabanisi isiphuzo ngaphambi kokudla kwasekuseni kanye dinner, isigamu sehora ngaphambi kokudla. Phakathi nezinsuku ezinhlanu ezalandela sokukhipha isiphuzo kufanele bedakiwe ngaphambi kwasemini kanye okulula phakathi efanayo isikhawu sesikhathi. Udinga ukwengeza "ukulawula Ukudla" we Stick ngaphambi kwasemini kanye dinner. Ungakwazi geza phansi ngamanzi. Kusukela 11 th-15 ngosuku th kufika ithuba lika "Metaboliki" yebhangqa amaphilisi ngemva nje kwesidlo sasemini kanye isidlo ntambama. "Lawula ukusekela ngokulondoloza Ukudla" is kusadingeka ukuthatha phezu Stick ngaphambi kwasemini kanye dinner. Cishe iqondile yokugcina (16-20 ngosuku) ukuze "Metaboliki" wanezela: "Ukuma umzimba" ku pair of amaphilisi emva kwasemini kanye dinner. Wokugcina izinsuku ezinhlanu okufanele zithathwe kuphela "ukuma umzimba" olinganise ofanayo. Ukuze ukwazi umphumela esiqondile "Slim Energy - izinsuku ezingu-25," Yinto engcono kakhulu ukwenza izilinganiso ngaphambi nangemva Yiqiniso. Abakhiqizi athembisa -8 cm imiqulu. umphumela emnandi okunjalo kufinyelelwa ngezithukuthuku amafomula yasekuqaleni futhi kwenqubekela-phambili kwezesayensi e ngesisekelo. Iningi izithako Quintessence futhi igxile izitshalo nezithelo. Imfihlo inhlanganisela izithako ezisebenzayo nencazelo futhi ngezabelo olunembile. I impahla eluhlaza Simila emahlathini wokuziphilisa Ukwakheka ezifanayo nge izinto eziphila abakhuthele ukungena "Amandla Slim". Izibuyekezo ukuvumela abathengi ukuqinisekisa ukuthi izinga inakekelwa eminyakeni kuzinga olulodwa. Lena enye yezinhlobo ezingu izimiso eziyisisekelo abakhiqizi abafuna ukuba seduze amaklayenti abo ngaso sonke isikhathi.
Khuluma mayelana ukusebenza umkhiqizo
Ingabe ngokwayo efakwe "Amandla Slim" intengo? Mhlawumbe kudingeka yahlulelwe ngokwezenzo ngenhloso yokwamukela amalungiselelo. Uma isiphuzo abakhwabanisi kususa puffiness, kungakhathaliseki kuyokusiza ekulweni cellulite? Abakhiqizi aveze ukuthi inkinga "orange ikhasi" sibonakala sishonile kakhulu futhi ebanzi okungaphezu nje amanzi. Ngakho, wathi isiphuzo kuvusa ukunyakaza khona ukutshezi emzimbeni, ubuthi ukuthi bekungaba isiqalo esihle ekulweni cellulite. Kodwa-ke lokhu kuzothatha iqoqo letengetiwe. Bese kuthi-ke kuphakama umbuzo: Ingabe ukusetshenziswa okunengqondo amanzi amaningi ngesikhathi Yiqiniso? Phela, kukhona ingxoxo mayelana ukuvuvukala kanye nokususwa uketshezi ngokweqile. Abakhiqizi bathi emzimbeni womuntu kukhona kwegazi njalo kwamanzi ahlanzekile, futhi kumele njalo agcwaliswa. Yingakho isiphuzo abakhwabanisi itholakala ifomu powder. Lapho-ke buhlanjululwe ngamanzi, bese esiphuza ingilazi uya "Order of Merit" by upotreblonnoy ketshezi. I kunazo asebenzayo we izinso zethu emsebenzini ekuseni, ngakho iningi ketshezi kufanele udle ekuseni. Phakathi reception "Amandla Slim" Imiphumela izobonwa ngokushesha, kodwa khumbula ukuthi ezinsukwini zokuqala ngobuningi amanzi ngokweqile. Khona-ke amanye emuva, kangangokuthi izuzwe kufanele aphathwe ngomoya ophansi.
Ngesikhathi ukusetshenziswa "ukulawula Ukudla" tames indlala ngenxa umsebenzi konjac sezinsini. Uma kwenziwa lapho kufanele amanzi ke siyakhukhumala ligcwale ingxenye esiswini. Empeleni, isenzo we-fiber, ngokushesha nje futhi kusebenze kahle. Ngemva isilinganiso esifanele ukudla ezithathwe, izinyathelo ezidingekayo ifomula "Metaboliki". Lokhu ukusheshisa we izinqubo umzimba ngezithukuthuku isinyathelo caffeine kanye pepper.
Lokho imikhiqizo ayemahle, kungaba kuhle ukufunda imiyalelo ukusetshenziswa. Ngeke kube khona iphuzu ohlelweni, uma esiswini ukugcwalisa amaphilisi izakhi kanye izimpushana. Lapha-ke kumelwe kuthiwe umkhiqizo uyabanikeza umzimba nazo zonke izakhi mkhondo kubalulekile futhi, ngokufanelekile, esikhundleni eziningana zokudla ezivamile ngosuku. ingxube izakhi empeleni suppresses umuzwa indlala. Asikho isidingo ukusheshe ukweqisa, kodwa induduzo yakho siqu, ungakwazi ngezinye izikhathi ukuyeka isidlo santambama esivuna ukusetshenziswa "Amandla Slim." Izibuyekezo amantombazane ukuncipha ku mikhiqizo ngokuvamile omuhle, njengoba kunomuzwa satiety nokuzola. Kusho inika ophethe vivacity, futhi ngoba kusihlwa kungaba okunye ukuqeqeshwa ezemidlalo. Iningi dieters waphawula ukwanda ngokuphawulekayo zokukhuthaza ukuvivinya umzimba, ngenxa yalokho empeleni uya isisindo ngokushesha. Ungaphinda uthi ukuthi kuyinto jikelele umkhiqizo line lokwakha yemisipha, okuyinto ebaluleke abadlali ngokukhethekile. Kulokhu, njengoba okunomsoco isimame khulumela eziyihlazo Amandla Slim.
Kuyinto isikhathi sokukhuluma mayelana nalokho okuseza ngaphansi kwegama lomkhiqizo we nkampani. Lokho usimema ukuba 'Amandla Slim "? Ukwakheka muhle ngokwanele, futhi imikhiqizo efanele umsoco kahle. inqubo izinqubo okumelwe ithoma begodu kuragela phambili kuba ngenxa yokuba khona lichaza ekwakheni fennel. By endleleni, it suppresses ukuthambekela for amaswidi. Umzimba kuzuzisa sabadilla equkethe amaminerali acid. Inani isithelo ophathwa imizwelo eyakhayo futhi okwalandela amabutho olwandle. A sikaphalafini fat yangempela kungenziwa ngokuthi i tamarind, kuvimbela ekuqongeleleni okunamafutha imali. Lansium Parasiticum ukukhuthazela inyuka, nakho kunikeza umzimba nge amavithamini B, i-calcium ne phosphorus. nokuhlanzwa ngokucophelela ubuthi emzimbeni kufinyelelwa ngenxa Ibheyili khona. Yena ulungisa ukugaya. Ekupheleni asikwazi indiva mangosteen, okuyinto isheshisa umzimba futhi bazogcwalisa umzimba nge amavithamini.
Ngakho, konke ukwaziswa okukhona ikuvumela ukuba uqinisekise ukuthi ewusizo ukudla Isifaniso okungenamsoco liyinqolobane amavithamini namaminerali ngaphansi kwegama "Amandla Slim." Izibuyekezo uyavuma ukuthi izidakamizwa okunenzuzo ukuba isikhumba isakhiwo, amazinyo, izinwele nezinzipho. Fade fade amnyama ebusweni, emuva ibala enempilo, kuqinisa ipuleti ezipikili futhi amazinyo ephansi zimfundiso ziba yize. izimpushana Vegetable ehlanganisa izingxenye ukunikeza okusheshayo kwesisindo nempilo ngcono. Girls maka anda isikhumba kuyaqina, ukwanda okusheshayo e yemisipha (nge mbandela ukuthi kukhona umthwalo ngokomzimba), izifiso ngincipha imikhiqizo eyingozi, iziphuzo carbonated namaswidi. Ngenxa yalokhu, lokho akusho ahlupheke kwemizwelo uhlala ukuphishekela yokuchitha isizungu asebenzayo.
Yini esiyitholayo ngenxa, futhi ingabe kunomvuzo?
Ngakho, sicabanga ngemiphumela sokugcina ngemva kokuBusa Yiqiniso Amandla Slim. Izibuyekezo ibonisa ukuthi uhlelo inikeza kilojoule adingekile okuba umthamo omdala. Ngakho-ke, ukudla ngokweqile akudingekile futhi esitolo akuzange kudingeke ukuba drool phambi ugqoko nge kashokholethi. Lolu hlelo lubandakanya amaningi, esihlinzeka umuzwa satiety, futhi ukusetshenziswa nsuku iziphuzo ezibandayo futhi ivumela ukushintsha imikhuba yokudla kancane kancane. Phela, imiphumela emibi ohlelweni kungaqali, ukuze kungabi ingozi, kodwa ngakolunye uhlangothi zikhona Izimo hlelo. Ikakhulu, i-"Slim Amandla" akufanele isetshenziswe kwabesifazane abakhulelwe kanye lactating, kanye nalabo abangakwazi ukubekezelela amavithamini, kungazange kufinyelele yobudala noma ewela umkhawulo yobudala ohlukanisa abadala kusukela abadala. Isidingo kweso kuboniswana udokotela alikho, kodwa ngenxa ungalahlekelwa isisindo ekhaya, abagcina esimisweni reception kuphela. Odokotela ayibeki umncele ukunamathela lokuqala isimiso esinjalo, kodwa kungase kube ukuhlakanipha ukuba baphuze kude inkambo kubantu nge isisindo nezinkinga amathumbu ngokweqile. Ngaphezu kwalokho, izindlela umugqa kungenzeka ukuqinisa amasosha omzimba ukusula umzimba ubuthi. Ngakho ukuthi imikhiqizo guzzle kanye nokuvinjelwa. Into esemqoka - khumbula ukuthi ngokushesha umphumela akuveli ukwanda umthamo. Ukuze okuvula, imiphumela kufanele uyeke ukudla amanoni ocebile, neminikelo yakho yokuphuzwa ezidakayo nezinto zokuhlanza ukudla ebusuku. Ake imithwalo ngokweqile ngeke, kodwa ukuphumula asebenzayo futhi izizinda njalo emoyeni opholile kungaba ngcono ukusebenza. Ngakho uchitha imali esimweni le "Amandla Slim" uyofaneleka. Kuyinto okulingana esihlwabusayo futhi unempilo imikhiqizo eyingozi, thokozela ukudla kwakho!
Iyini imbangela yamacu omile?
Futhi lokho ephulukisa izakhiwo galangal ukwazisile?
Ukuxhumana nomphakathi: kanjani ukususa khasi "Meile"